Home Wararka Shirkii RW Rooble iyo Madaxda Maamul Goboleedyada oo Caawa Dib uga furmay...
Shirkii RW Rooble iyo Madaxda Maamul Goboleedyada oo Caawa Dib uga furmay Hotel Decale
Shirkii Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa Caawa ka furmay Hotel ku yaalla Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Shirka waxaa ku sugan Ra’iisul Wasaare Mohamed Hussein Rooble, waxaana ku wehliya Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, waana markii ugu horeyay ee shirka habeennimo la isugu yimaado, kana dhacdo Hotelka Decale.
Kulankii Khamiisa oo la isku mari waayey, kadib ayey Ra’iisal wasaaraha, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ku ballameen inay caawa sii wadaan shirarkoodii.
Arrimaha ugu weyn ee la isku mari waayey waxaa ka mida Amniga Qaranka oo mas’uuliyaddiisa uu doonayo inuu qaado Ra’iisal wasaaraha, Dardargelinta iyo jadwaleynta Doorashadda.
Previous articleTerminalka Movcon ee Garoonka Aadan Cade oo markale dib loo furay!
Next articleAmarka Farmaajo ee joojinta lacagta Imaaraadka ma hirgeli kartaa?
Siyaasiyiinta beesha Xawaadle oo ka horyimid ciidanka la geeyay Baladweyne
IMF oo war kasoo saartay qorshaha dayn cafinta Soomaalia
Alshabaab oo weerar gaadmo ah ku qaaday xero ciidan